मे 17, 2019 मे 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, समय
समय गजबको रहेछ । हामीले समयलाई चिन्न सकेको अवस्था छैन् । हिजो राजसंस्थाको पालामा राजाले आफ्नो दुनो सोझाए भन्नेहरूको कमी छैन, यसलाई पनि हामीले समय नै मान्नुपर्छ । आज समयले जनताका छोराछोरीहरुले देश हाकिरहेका छन् । दु:ख र पिडा थेग्ने त जनताले हो भन्ने कुरा यही समयले देखाउदैछ ।
आज जनताका छोराले समयलाई चिन्न छोडेको त होइन भन्ने कुरा वर्तमान समयले देखाउदैछ । हिजो जंग्गबहादुरले राज गरे उनको समय समाप्त भएकाले उनको ठाउँमा अर्का राजाले गद्धी समाले । उनको पनि पालो समयले विदा दिएकाले जनताका छोराले समयको फाइदा उठाउदैछन् तर कहिलेसम्म ?
समय र यसको महत्व
समयको फाइदा उठाउन नसक्ने त जनता रहेछन् । दिनभरि घाममा उभिएर भोट हाले समयले साथ दिन्छ की भनेर तर समलाई फाइदा उठाउने क्यास गर्ने काम भोट थाप्नेले पो उठाएको रहेछ । आखिर कहिलेसम्म यो सिलसिला चल्ला एक दिन यसको पनि समय तोकिनेछ ।
आज हामी खुसी छौं रमाएका छौं तर समयलाई फर्के र हेर्न सकेका छैनौ । आज मैले मेरो उमेर कति भनेर हेरेको त ५७ बर्ष पार भइएछ । यती लामो समय गएको थाहै भएनछ । समय तपाईं हामीको गएको छ । आजका युवा दिन प्रतिदिन बुढा हुदैछन् बुढा ढल्दैछन् यो चर्खा हो चल्दै रहनेछ ।
समयलाई सामन्यतया एकदेखि अर्को घटनाको अन्तरका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यसलाई विभिन्न युगबाट विभिन्न उपाय अपनाई नाप्ने गरेको पाइन्छ । कुनै घटना घटेर बिती सकेपछि घटनाको उल्लेख गर्ने बेलादेखि घटना घटेको बेलासम्मको बीचको अन्तराललाई हामी समयले नै नाप्ने गर्छौं । यसैलाई समय चक्र भन्दछन् ।
← मोबाइल फोन पानीमा भिजेमा यी उपायहरु अपनाउनुस्
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषहरुप्रति मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू →
One thought on “समयलाई चिन नसक्नु दुर्भाग्य”
Pingback:शास्त्रमा अनुसार यदि आफूमा आएको दुर्भाग्यलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस्